Tag: KISMAAYO | Sagal Radio Services
Wafuudii ka qeyb gashay caleema saarkii Axmed Madoobe oo martiqaad loogu sameeyay duleedka Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • October 15, 2019
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta duleedka Kismaayo waxaa uu martiqaad ugu sameeyay wafuudii ka qeyb gashay caleema saarkiisa.
Wararkii ugu dambeeyay ee qaban qaabada Xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland
Sagal Radio Services • News Report • October 12, 2019
Qaban qaabadii u dambeysay ee xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ka socota magaalada Kismaayo, iyadoo la filayo in xaflada ay dhacdo gelinka dambe ee maanta oo Sabti ah.
Daawo: Shiikh Shariif “Waa Nasiib darro 30 sano kaddib dalka in dib loogu celiyo Nidaam Kali- Talis”
Sagal Radio Services • News Report • October 11, 2019
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadlay kadib markii uu gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu welwel weyn ka qabo sida xaalada siyaasadda dalka ay ku socoto.
Kenya oo wafdi ka qeybgalaya Caleemasaarka Axmed Madoobe u direysa Kismaayo
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in wafdi ka socda dowlada Kenya ay ka qeybgalayaan munaasabada caleemo saarka Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, sida uu xaqiijiyay hogaamiyaha aqlabiyadda Kenya, Aadan Barre Ducaale.
Jubbaland oo war cusub ka soo saartay caleema saarka Axmed Madoobe
Sagal Radio Services • News Report • October 8, 2019
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland uu dhici doona marka ay soo dhameystirmaan wafuuda ka qeyb galeysa Caleema saarka.
Sagal Radio Services • News Report • October 7, 2019
Maamulka Jubbaland ayaa jawaab adag ka bixiyay qoraal xalay ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu sheegay in Dowladda qorshe cusub u diyaarisay soo xulista iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland loo dhan yahay.
Golaha Wasiirada Jubbaland oo ka shiray dib u dhaca ku yimid Caleema saarka Axmed Madoobe
Sagal Radio Services • News Report • September 26, 2019
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha Wasiirada oo lagaga hadlay qodobo kala duwan.
Sagal Radio Services • News Report • August 22, 2019
Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u doortay Axmed Madoobe Madaxweynaha Jubbaland ee afarta sano ee soo socota, kaddib doorasho goor dhow ka dhacday Kismaayo.
Xildhibaan Fiqi;”Waxaan u nimid Kismaayo in aan u gurmano federaalnimada.”
Xildhibaano isugu jira labada gole ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo iyadoo xildhibaanadaana ay sheegeen inay goobjoog ka noqon doonaan doorashada lagu wado in toddobaadka dambe ka dhacdo magaalada Kismaayo.
Musharixiinta Jubbaland oo sharuud ku xiray ka qeybgalka doorashada
Sagal Radio Services • News Report • August 7, 2019
Musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad gobolleedka Jubbaland oo Kismaayo kulan kula qaatay wakiilka Urur gobolleedka IGAD ayaa waxaa ay u gudbiyeen sharuud ay ku xireen ka qeybgalka doorashada Jubbaland.
Sagal Radio Services • News Report • July 13, 2019
Waxaa isisoo taraya khasaaraha weerarkii qaraxa ku bilaaday oo Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel lagu magacaabo Madiina horayna loo oran jiray Cascasey, kaas oo ku yaalla bartamaha magaalada Kismaayo ee xunta Gobolka Jubbada Hoose.
Sagal Radio Services • News Report • July 12, 2019
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunt gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegayaa in weerarkii lagu qaaday gelinkii dambe ee maanta hotel Medina “EX Cascasey” dadkii ku dhintey ay ka mid ahay Hodon Naaleeye oo ahayd saxafiyad soo saarta filmaan dukumantari ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii lagu qaaday hotel ku yaal magaalada Kismaayo
Wararkii ugu dambeeyay ee weerarka lagu qaaday Hotel Cascasey ee magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in weli la maqlayo rasaas iyo qaraxyo.
Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo soo saaray jadwalka guud ee doorashada [Akhriso]
Sagal Radio Services • News Report • July 4, 2019
Guddiga Madaxa banaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta soo saaray jadwalka guud ee doorashada Jubbaland, sida tan Madaxweynaha iyo Baarlamaanka.
Axmed Madoobe oo ka hadlay doorashada Jubbaland.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo maalmahii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay Magaalada Nairobi ayaa saaka si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe: Dastuurka uu madaxweynaha ku yimid haddii la ixtiraami waayo Soomaaliya way is garatay oo nin ka xoog badan nin kale ma jiro
Sagal Radio Services • News Report • June 5, 2019
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa isagoo caro muujinaya waxa uu mar kale ku celiyay in Jubbaland ay xaq u leedahay fulinta doorashadeeda, cid kusoo faragalin kartana aysan jirin.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo galabta dib ugu laabtay Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • April 3, 2019
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa galabta dib ugu laabtay Caasimada KMG ah ee Jubbaland kaddib todobaad uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, halkaasoo uu wada hadalo kula lahaa madaxda dowladda Federaalka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo guddoomiyay shir ay ka qeybgaleen wasiiro Federal ah iyo wasiirada Jubbaland
Sagal Radio Services • News Report • March 13, 2019
(Daawo Sawirada)Raysul wasaare Khayre oo si ka badalan safarkiisii hore loogu soo dhaweeyay Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • March 11, 2019
Dad aad utiro badan ayaa maanta isugu tagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, kuwaa oo isugu jiray masuuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland, ururrada bulshada rayidka ah iyo ardeyda wax ka barata Iskuulaadka magaalada, ayadoo dadkan ay u tageen halkaasi si ay usoo dhaweeyaan wafdi uu horkacayo raysul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Clai Khayre.
Wadahadalo u bilowday Dowlada Federalka iyo Maamulka Jubbaland
Sagal Radio Services • News Report • March 10, 2019
Maamulka Jubbaland oo is hortaagay dadweyne soo dhoweyn lahaa Musharax C/rashiid Xidig
Maamulka Jubbaland ayaa is hor-taag ku sameeyay dadweyne soo dhoweyn lahaa Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig, kaasoo lagu wado inuu magaalada Kismaayo kaga dhawaaqo Musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha.
Ciidamada Jubbaland oo miinooyin badan ka soo bixiyay wadooyinka degmada Jamaame
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2019
Wararka ka imanaya gobolada Jubbooyinka ayaa sheegaya in ciidamada Daraawiishta Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ee Dowlada Federalka ay ku guuleystay inay ka soo saaraan miinooyin faro badan wadooyinka taga degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ciidamo la wareegay deegaano ka tirsan Jubadda Hoose
Sagal Radio Services • News Report • January 26, 2019
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo is kaashanaya ayaa la wareegay deegaano dhaca Galbeedka Kismaayo.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Jubbaland oo sheegtay inay nafteeda kala soo baxsatay Kismaayo
Xildhibaan Khadiijo Aadan Cabdi oo ka mid ah Baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegtay inay nafteeda kala soo baxsatay magaalada Kismaayo, kaddib markii ay la kulantay cabsi gelin iyo handadaad.
Jubbaland oo aqbashay dadaalada uu wado Aqalka Sare
Sagal Radio Services • News Report • December 8, 2018
Maamulka Jubbaland ayaa soo dhoweeyay dadaalada uu wado Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka, kaasoo ujeedkiisa yahay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka u dhaxeeya dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Xaalada Kismaayo oo saaka degan iyo 11 askari oo ku lug laheyd iska hor imaadkii shalay oo la qabtay
Sagal Radio Services • News Report • October 28, 2018
Xaalada magaalada Kismaayo ayaa saaka degan, kaddib iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay gelinkii dambe dhex maray Ciidamo ka wada tirsan Jubbaland, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo Booqanaya Duleedka Kismaayo.
Sagal Radio Services • News Report • October 20, 2018
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi (Indha qarshe) iyo Masuuliyiinta Maamulka Jubbaland ayaaMaanta lagu wadaa inuu booqdo saldhigyo ku yaala duleedka Magaalada kismaayo ee Gobalka Jubada Hoose oo ay joogaan ciidamada Xoogga.
Maamul goboleedyada oo hakiyay wada shaqeyntii dowladda federaalka (Akhriso war murtiyeed)
Sagal Radio Services • News Report • September 8, 2018
Shirkii Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo afartii cisho ee la soo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay.
Shirar gaar gaar ah oo ka dhacay Kismaayo iyo Shirka maamulada oo maalintii labaad galay
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socdo shirka madaxda maamul goboleedyada oo galay maalintiisii labaad.
Mareykanka oo duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay duleedka Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • April 14, 2018
Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in duqeyn cirka ah 11-kii bishan April oo ku beegneyd Arbacadii la soo dhaafay ka fuliyay duleedka waqooyi galbeed magaalada Kismaayo.
Kulan looga hadlayo doorashooyinka dalka 2020 oo ka furmay Kismaayo (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • December 26, 2017
SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo lagu soo dhaweeyay
Sagal Radio Services • News Report • November 7, 2017
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah oo mudooyinkii ugu danbeeyay uu kaga maqnaa Safar kaas oo uu Magaalada Muqdisho kaga soo qayb galay Shirka wadatashiga Madaxda DFS iyo Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Dhexe.
Al-Shabaab oo weerar madaafiic ku qaaday saldhig ciidan ku yaal duleedka Kismaayo
Al-Shabaab ayaa weerar madaafiic ku qaaday saldhig ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastoo 30KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta Jubadda Hoose.
Sagal Radio Services • News Report • October 11, 2017
War murtiyeed ka kooban illaa 16 qodob ayaa goor dhow laga soo saaray shirka Wadatashiga ee Kismaayo ugu socday Madaxda dowladda Goboleedyada Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Galmudug.
Shirka Madaxda dowladda Goboleedka uga socda Kismaayo iyo shakiga laga qabo
Sagal Radio Services • News Report • October 9, 2017
Shan carruur oo walaalo ah ayaa ku geeriyootay dab ka kacay xero barakac oo ku taal Kismaayo [SAWIRRO]
Sagal Radio Services • News Report • September 17, 2017
Ilaa shan carruur oo walaalo ah ayaa geeriyootay sedex qof oo kale oo ay ku jirto hooyo da' ahna dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay xerada barakacayaasha dalxiiska ee magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku noolaayeen qoysas danyar ah.
Qaraxyo lagu qabtay magaalada Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • April 8, 2017
Ciidamada nabad-sugida maamul gobolleedka Jubbaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo waxaa ay ku soo qabqabteen walxaha qarxa iyo miinooyin la doonayay in loo adeegsado falal qaraxyo ah.
Safiirka Britain u fadhiya Soomaaliya Harriet Matthews oo booqatay magaalada Kismaayo (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • August 3, 2015
Safiirka cusub ee dowlada Britain uga wakiilka ah dalka Soomaaliya Harriet Matthews ayaa booqasho ku tagtay xarunta maamul goboleedka Jubbaland ee Kismaayo.
Wararkii ugu danbeeyay ee laga helaayo Qarax xoogan oo lagu weeraray Ciidamada MKG Jubba
Sagal Radio Services • News Report • November 2, 2014
Wararkii ugu danbeeyay ee laga helaayo Qarax maanta ka dhacay deegaanka Yoontooy ee gobalka Jubada Hoose, ayaa sheegaya in Qaraxaasi uu geystay Khasaaro kala duwan.
Weeraro AMISOM Gaadiid Looga Gubay oo ka Dhacay Duleedyada Kismaayo iyo Baraawe.
Sagal Radio Services • News Report • October 13, 2014
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaallo culus ay maanta ka dhaceen duleedka magaalada Kismaayo oo maalmo ka hor ay gaareen maleeshiyaadka Axmed Madoobe iyo ciidanka Kenya.